Horudhac: Barcelona vs Mallorca… (Blaugrana oo bartilmaameedsanaysa guusheedii lixaad oo xiriir ah marka ay caawa soo dhoweynayaan Mallorca) – Gool FM
(Barcelona) 07 Dis 2019. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa indhaha ku haysa inay gaarto guusheedii lixaad oo xiriir ah tartammada oo dhan marka ay garoonkeeda Camp Nou soo dhoweynayso caawa oo Sabti ah naadiga Mallorca.
Tababare Ernesto Valverde kooxdiisa ayaa haatan hoggaaminaysa horyaalka La Liga, inkastoo ay 31-dhibcood la wadaagto Real Madrid, halka Mallorca ay fadhiso meel hal dhibic u jirta boosaska looga laabto horyaalka, kadidb markii ay 14-dhibcood la timid 15-kii kulan ee ay ciyaartay horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan.
Garsooraha: Jose Luis Munuera Montero (Spain)
Kooxda Barcelona ciyaaryahankeeda Sergio Busquets ayaa dib ugu soo laabanaya khadka dhexe ee kooxda martida loo yahay kaddib markii uu ka soo laabtay ganaax uu la maqnaa.
Jordi Alba ayaa weli la sii maqnaanaya dhaawac muruqa ah, halka aan arki doono Junior oo sii wadanaya inuu ka ciyaaro booska daafaca garabka bidix.
Ivan Rakitic ayaa kula tartami doona Arthur laacibkii ku bilaaban lahaa safka hore ee booska khadka dhexe ee Barcelona.
Dhinaca kale kooxda Mallorca xiddigeeda Lago Junior ayaa weli dhaawac sheegayana, waxaana gabarka bidix ku soo bilaaban kara Takefusa Kubo.
Fran Gamez ayaa ku soo bilaaban doona garabka bidix ee daafac Mallorca, iyadoo Lumor laga ganaaxay markii uu qaatay labo kaar oo kuwa digniinta ah ah markii ugu dambeysay.
Labada ciyaaryahan ee Baba iyo Joan Sastre ayaa kaliya hal kaar oo Jaalle ah u jira inay hal kulan ganaax ku maqnaadaan.
>- Barcelona ayaa guuleysatay 13-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku ciyaartay kulammada horyaalka La Liga.
>- Kooxda Barcelona ayaa dhalisay ugu yaraan afar gool saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka La Liga oo ay ku dheeshay garoonkeeda.
>- Mallorca ayaa khasaaro la kulantay lixdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo horyaalka La Liga ku ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda.
>- Barcelona ayaa guuleysatay qeybta hore iyo ciyaarta oo dhammaystiran shanteedii kulan ee ugu dambeeyey oo horyaalka La Liga ay ku ciyaartay garoonkeeda & shanteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ka dheeshay Mallorca tartammada oo dhan.
>- Barcelona ayaa guuleysatay shanteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay la ciyaartay kooxda Mallorca tartammada oo dhan.
>- Barca ayaa shabaqeeda gool ka ilaashatay shan ka mid ah todobadeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahday kooxda Mallorca tartammada oo dhan.
>- Kooxda Barcelona ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool shanteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay la ciyaartay naadiga Mallorca tartammada oo dhan.
>- Kooxda Mallorca ayaa laga dhaliyey ugu araan labo gool shan ka mid ah lixdeedii kulan ee ug dambeeyey oo ay horyaalka La Liga ku soo ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda.